Huawei P8 Max, Huawei P8 ၏အကြီးဆုံးဗားရှင်း | Androidsis
Huawei ၏စွမ်းဆောင်ချက်အသစ်ဖြစ်သော Huawei P8 ကိုတင်ဆက်ရန်လန်ဒန်မြို့၌ပြုလုပ်ခဲ့သည့်အဖြစ်အပျက်အတွင်းတရုတ်ကုမ္ပဏီသည် P8 ဗားရှင်းကိုလည်းထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။ Huawei P8 Maxတရုတ် phablet ဘယ်အချိန်ရောက်မယ်ဆိုတာကိုတော့အခုထိမသိသေးပါဘူး။ ကျနော်တို့တောင်မှဘယ်လိုမြင်ကြပြီ တစ် ဦး Lite ဗားရှင်း တူညီတဲ့ terminal ကနေဖြန့်ချိခဲ့သည်။
လက်ရှိတွင်စျေးကွက်၌ပုံမှန်ဗားရှင်းနှင့် Lite P8 ဗားရှင်းကိုတွေ့ရပြီးဖြစ်သည် 24 ဇွန်လ ဒီကတည်းကပြောင်းလဲသွားပါလိမ့်မယ် 6,8 "terminal ကို ၎င်းသည် screen အရွယ်အစားအရအကြီးဆုံးဆိပ်ကမ်းတစ်ခုအနေဖြင့်စျေးကွက်သို့ရောက်ရှိတော့မည်ဖြစ်သည်။ ယခုတရုတ်စမတ်ဖုန်းသစ်သည်အခြားပြိုင်ဘက်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်ရန်ပြိုင်ဘက်မရှိသေးပါ၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် Galaxy Note, Iphone6Plus စသည့်ဆိပ်ကမ်းများသည်ပိုမိုကြီးမားသောဗားရှင်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အရွယ်အစားသေးငယ်သည့်လက်ကိုင်ဖုန်းများဖြစ်သည်။ တရုတ်ထုတ်လုပ်သူအထိမ်းအမှတ်သင်္ဘောတင်။
Huawei ၏ကြီးမားသောစမတ်ဖုန်းကိုထုတ်ဖော်ပြသခြင်းသည်၎င်း၏အဓိကစွမ်းဆောင်ရည်မြင့် terminal အသစ်ကိုမိတ်ဆက်ပြသခြင်းဖြစ်သည်ဟုကြေငြာလိုက်သောအခါအခမ်းအနားသို့တက်ရောက်သည့်သတင်းစာများကအံ့အားသင့်ခဲ့ရသည်။ Huawei သည်ကြီးမားသောစမတ်ဖုန်းကိုယနေ့ဈေးကွက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရှိနိုင်သောအရာနှင့်ပြသခဲ့သည်။
Huawei P8 Max၊
ကျနော်တို့အရင်ကမှတ်ချက်ပြုသကဲ့သို့, ဒီ Huawei P8 Max ရှိလိမ့်မယ် ၅.၅ လက်မမျက်နှာပြင်, လက်ရှိစျေးကွက်အတွင်းအကြီးဆုံးစမတ်ဖုန်းတ ဦး ဖြစ်ခြင်း။ ဒီဖန်သားပြင်တွင် resolution ရှိသည် FullHD ဂူဂဲလ်ပလေးတွင်အမြင့်ဆုံးအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်နှင့်အတူမာလ်တီမီဒီယာအကြောင်းအရာများကြည့်ရှုခြင်း၊ ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်ကစားခြင်းများအတွက်အဆင်ပြေပုံရသည်။ အတွင်းပိုင်းတွင်ရှစ် core ပရိုဆက်ဆာနှင့် ၆၄-bit ဗိသုကာတို့ကိုတရုတ်ကုမ္ပဏီကိုယ်တိုင်ကထုတ်လုပ်သည် 935.
၎င်း၏သိုလှောင်မှုပမာဏသည် 64 GB ဖြစ်သည့်အပြင် microSD slot မှတစ်ဆင့်တိုးချဲ့နိုင်သည်။ ၎င်း၏ဓာတ်ပုံအပိုင်း၌၎င်း၏နောက်ဘက်သို့မဟုတ်အဓိကကင်မရာမှာ 13 Megapixels ဖြစ်ပြီးရှေ့ကင်မရာသည်5MP ဖြစ်သည်။ ၎င်း၏အရွယ်အစားနှင့်စပ်လျဉ်း။ ၎င်းသည်မြင်ကွင်း၏အရွယ်အစား၊ ကြီးမားသော terminal တစ်ခုအနေဖြင့်မျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်း ၁၈၂.၇ မီလီမီတာ x ၉၃ မီလီမီတာ x ၆.၈ မီလီမီတာကိုတွေ့ရသည်။ ဤအတိုင်းအတာများနှင့် P182,7 Max ကိုယ်တိုင်၏ကြီးမားသောအရွယ်အစားကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်စက်ပစ္စည်းသည်စွမ်းဆောင်ရည်ကြီးမားသည့်ဘက်ထရီကိုမည်သို့တပ်ဆင်ပုံကိုတွေ့နိုင်သည်။ 4360 mAh ဘက်ထရီ.
ဒီတရုတ်ထုတ်ကုန်အသစ်ကဈေးကွက်ထဲကိုရောက်သွားပါလိမ့်မယ် လာမယ့်ဇွန်လ 24ကုမ္ပဏီအနေဖြင့်တိကျသောစျေးကွက်သို့ရောက်ရှိနိုင်မနိုင်သို့မဟုတ်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပစ်လွှတ်မှုရှိမရှိနှင့်ပတ်သက်သည့်သတင်းအချက်အလက်များကိုပေးအပ်ခြင်းမရှိသေးပေ။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ အကယ်၍ terminal သည်ဥရောပစျေးကွက်မဟုတ်သည့်အခြားစျေးကွက်တစ်ခုတွင်အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်နေ့၌ထွက်ခွာသွားပါက Huawei သည်ဥရောပစျေးကွက်သည်အရေးအကြီးဆုံးစျေးကွက်တစ်ခုဖြစ်သည်ကိုသိသောကြောင့်၎င်းသည်ရောက်ရှိရန်အချိန်များစွာကြာလိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်တို့မယုံကြည်ပါ။ ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ဆိပ်ကမ်းများ၏ရောင်းအား၏စည်းကမ်းချက်များ။ ဟုတ်ပါတယ်၊ ဒီကြီးမားတဲ့ terminal တစ်ခုရဲ့ unit ကို ၀ ယ်ချင်တဲ့သူတွေအတွက်ဒီပစ္စည်းဟာဈေးနှုန်းကိုယူရို ၇၀၀ လောက်ရှိမယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့အိတ်ကပ်တွေကိုလျှော့ပေးရမယ်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » Huawei » Huawei P8 Max သည်အကြီးမားဆုံး Huawei P8 ဇွန်ကိုဇွန်လ ၂၄ ရက်တွင်ရောက်ရှိမည်ဖြစ်သည်
ဒါဟာဒီမိုဘိုင်းကိုရွေးပြီး x2 mediapad ကိုရွေးချယ်တာပါ။ ဒါကြောင့် x2 mediapad ကနှစ်ဆသက်သာတယ်၊ ဒီတရုတ်တွေကလူထုံတွေ၊ တရုတ်တွေမှာ p8 max နဲ့ဆင်တူတယ်။ တစ်ချည်ရောင်း
Leonel Batista Romero ဟုသူကပြောသည်
စွန့် ဦး တီထွင်လုပ်ငန်းရှင်များအတွက် Huawei ပိုကြီးပြီးကြာရှည်ခံသည့်ဘတ်ထရီများဖြစ်ရပ်များနှင့်ဖြစ်ရပ်များနှင့်အခြားအရာများအတွက်ကျွန်ုပ်လိုချင်သည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်ထွက်ရှိလာသည့်ကျွန်ုပ်တို့၏စီမံကိန်းကိုကြေငြာရန်ပိုမိုအဆင်ပြေမည့် Huawei p8 max ကိုစားပွဲတွင်အစားထိုးလိုက်သည်။
Leonel Batista Romero အားပြန်ပြောပါ